Yaa abuuray YouTube: waxa uu yahay iyo sida ay ahayd horumarkeeda cajiibka ah ee internetka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Daawashada fiidiyowyada aan jecelnahay, dhegeysiga muusikada, ku biirista kanaalka ama habeynta mid adiga kuu gaar ah, soo gelinta fiidiyowyada mowduuc kasta ama xitaa inaad si toos ah ula sheekeysato dadka kale ee adduunka ka socda marka aad is duubeyso, ayaa ka mid ah tayada ay soo bandhigaan qalabyada sida YouTube.
Waqtigan xaadirka ah waxaan la soconaa isticmaalka weyn ee codsigan uu leeyahay maalin kasta, sababtoo ah iyaga ayaa ku mahadsan kumanaan iyo kumanaan qof ayaa fayras u galay nuxurka ay soo galiyaan. Waxa aad u yar ayaa og yaa lahaa fikradda xariifnimada leh ee naqshadaynta qalab awood u leh inuu sameeyo waxyaalahan oo dhan.
Qormadan waxaan kuugu imaanaynaa inaan kaala hadalno codsigan xariifnimada leh iyo taariikhdiisa weyn ee internetka.
1 Waa maxay Youtube
2 taariikhda youtube
2.1 Casho-sharafeedkii YouTube ka bilaabay
2.2 Muuqaalkii ugu horreeyay ee taariikhdiisa
2.3 Hal tallaabo oo kale oo xagga ammaanta ah
2.4 sumadda kowaad
2.5 Guul iyo Google
2.6 waagii HD
3 Youtubers ugu fiican
3.2 Ciyaartoyga Jarmalka
Waa maxay Youtube
Kahor intaanan qoto dheer u galin taariikhdeeda, waxaan u baahanahay inaan sharaxno waxa uu yahay qalabkani. Youtube waa codsi u shaqeeya sida qalab online ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad geliso oo aad daawato fiidiyowyada nuxurka iyo nooca kasta. Waxaa la abuuray qiyaastii sanadka 2005 saddex dhalinyaro ah kuwaas oo go'aansaday in ay qabtaan hadaf cusub oo ay ka tagaan adduunka Paypal: Steve Chen, Jawed Karim iyo Chad Hurley.
Waa mid ka mid ah aaladaha, Google, sanado ka dib go'aansaday inay iibsadaan oo ay maalgashadaan. Fikradda ayaa kacday iyada oo ujeedadu tahay in la naqshadeeyo qalab aad ku wadaagi karto fiidiyowyada adigoon ku cadaadin. Qaar badan oo ka mid ah asaasayaasheeda ayaa sidoo kale ka shaqeeyay aalado ay ka mid yihiin Facebook, mana aha wax la filan karo tan iyo, muddo ka dib, madal maqal-muuqaal ah ayaa sii kordheysa oo qaadanaysa xitaa in ka badan dhinaca shabakadda bulshada.
Hadda, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa isticmaala YouTube maalin kasta, marka lagu daro, codsiga laftiisa waxaa loogu talagalay 76 luqadood oo kala duwan. Faahfaahin la xidhiidha oo ka dhigaysa codsiga loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Sidoo kale waa mashiinka labaad ee raadinta iyo goobta saddexaad ee loogu badan yahay intarneedka. Ilaa hadda waxa jira muuqaalo badan oo ka kooban tiro badan oo aragtiyo ah, laakiin heesta Baby Shark Dance ayaa qaadaysa 1-da ugu sareysa, iyada oo wadarta 8,1 milyan ee daawashada
YouTube-ka, kaliya kuma biiri kartid kanaalada kale ama isticmaalayaasha, laakiin adigaa iskaa u samaysan kara habayso oo soo geli nuxurka aad rabto. Ilaa hadda, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo kanaalada ah: ciyaaraha fiidiyowga, nafaqada iyo cuntada, ciyaaraha, wararka, majaajilada, iwm. Kaliya waa inaad isticmaashaa akoonkaaga Google oo aad bilawdo tacaburka YouTuber ahaan.
Haddii aad jeceshahay adduunka YouTube oo aad go'aansato inaad isticmaasho fiidiyowyo dhaadheer, waad ka ganacsan kartaa ama waxaad ku dari kartaa xayaysiis. Taas waxaad ku heli doontaa fiidiyowyadaada inay wax ku biiriyaan boqolkiiba lacag ah bishii iyo sannadlaha ah oo aad iyo aad u sii badanayso fayras. Hadda waxaa jira Youtubers badan oo go'aansada inay lacag ka sameeyaan iyaga oo maalin kasta waxaa jira channels badan oo loo furo dadweynaha.
Waa suurtogal in la soo dejiyo fiidiyowyada iyada oo loo marayo beddelayaasha laga helo internetka. Beddelayaashu waxay kaa caawinayaan inaad soo dejiso fiidiyowga aad dooratay oo qaab MP4 ah. Kaliya nuqul ka samee URL-ka fiidiyowga oo ku dheji mashiinka raadinta beddelahaaga, dabadeed soo dejinta waa la gelayaa oo soodejintu si toos ah ayaa loo fulin doonaa.
Casho-sharafeedkii YouTube ka bilaabay
2005tii waxa ay ahayd wakhti xidhiidhka intarneetku uu ahaa mid aan fiicneyn. Ma jirin codsiyo ama shabakado bulsho si ay awood ugu yeeshaan in ay wadaagaan sawirada ama fiidiyowyada la sameeyay waxaana jiray kaliya email ahaan habka kaliya.
Haddaba waxay ahayd habeen habeenada ka mid ah, nin Chad Hurley ah, iyo labadiisii ​​saaxiib ee kale. waxay la yimaadeen fikrad ay ku naqshadeeyaan madal ama codsi wadaagi kara muuqaalada iyadoon loo eegin culeyska uu leeyahay. Waxay ahayd kaliya ku filan in la sameeyo muuqaal casho ah oo si lama filaan ah dhammaan nalalka iftiinka ayaa ku dhacay madaxooda. Sidaas ayuu YouTube ku yimid.
Muuqaalkii ugu horreeyay ee taariikhdiisa
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee taariikhda ayaa calaamadeeyay ka hor iyo ka dib shaki la'aan xirfaddiisa. Hagaag, ma ahayn ilaa Abriil 23, 2005 markii YouTube ay oggolaatay soo dejinta walxaha sida fiidiyowyada. Nuxurka ugu horeeyay wuxuu socday 20 ilbiriqsi, Chad waxaa loo arki karaa nin dhalinyaro ah oo booqanaya beerta xayawaanka California. Haddii ay dhacdo inaad weli la yaabban tahay muxuu yahay muuqaalkii ugu horreeyay, waanu kuu soo ogaannay.
Hal tallaabo oo kale oo xagga ammaanta ah
Waqtigaas, qofna ma ogeyn in codsigan uu noqon doono mid aad iyo aad u badan fayras waqti ka dib, xitaa kuwa abuuray ma ogaanin ama u diyaarsaneyn waxa iman doona. Taasi waa sababta wakhtigaas, YouTube lagu soo bandhigay interface gaar ah oo aad u badan oo kaliya oo aad u diri karto fiidiyowyo dadka yaqaan. Maxaa sababay in codsiga la qariyo oo ay aad u yaraayeen booqashooyinka bilaha iyo sanadaha.
Waxay ahayd ilaa bilo ka dib, markii madal ay soo galisay dabool laba dhalinyaro ah oo ku dheeshanaya heesta kooxda muusiga caanka ah ee Backstreet Boys oo ay noqotay mid faayraysa. Guusha muuqaalku waxa ay ahayd in uu gaadho 6 milyan oo aragtiyood.
YouTube waxay qaaday talaabo kale oo hore loogu qaaday guusha markii sumad caan ah ay go'aansatay inay ku xayaysiiso oo ay ku xayaysiiso alaabtooda YouTube. Ma ahayn wax ka badan kana yar Nike. Summadani waxay ahayd tii ugu horreysay ee sharad ku gashay YouTube oo bilawday inay ka ganacsato fiidiyowyada. Fiidiyowgii ugu horreeyay ee ay daabacday astaanta ayaa ahaa goob xayeysiis ah oo uu ku jiro ciyaaryahankii hore ee kubbadda cagta Brazil Ronaldinho.
Guul iyo Google
Muddo ka dib, YouTube waxaa soo kordhay kumanaan iyo kumanaan qof. Madalku waxa uu gaadhay 19,6 milyan isticmaale. Tani waxay keentay in Google uu ogolaado inuu heshiis la saxiixdo madal iyo habkan, YouTube waxay heshay fursad ay ku geli karaan lacagta.
Horumarinta tignoolajiyada, YouTube ayaa sidoo kale dareemay baahida loo qabo in la cusbooneysiiyo. Oo ay la socoto, wuxuu siiyay daawashada fiidiyowyada 480p iyo xitaa 720p. Faahfaahintaani waxay ogolaatay hagaajinta tayada fiidiyowyada.
Youtubers ugu fiican
MrBeart waa youtuber Mareykan ah waxaana hadda loo arkaa youtuber-ka ugu mushaarka badan sameynta muuqaallada YouTube-ka. Sidoo kale loo yaqaan Jimmy Donaldson, Waxa uu shaqadiisa ka bilaabay YouTuber sanadkii 2012 wixii markaas ka dambeeyay muuqaalladiisu waxay noqdeen kuwo si isa soo taraya u faafaya. Fiidiyowyadiisa waxay bixiyaan waxyaabo aad u kala duwan oo hal abuur leh, tusaale ahaan, waa mid ka mid ah kuwa kaliya ama mid ka mid ah kuwa yar oo sameeya fiidiyowyo leh hawlo adag ama caqabado iyo sidoo kale sameeya fiidiyowyo vlogging ah oo asal ah. Shaki la'aan, muuqaalkiisa ugu quruxda badan waa mid uu ku soo celiyay jawiga taxanaha Netflix ee Game Squid.
JuegaGerman waa Chilean YouTuber, waxaa loo arkaa kan ugu caansan uguna muhiimsan Chile. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Jarmalka Garmendia, nuxurkiisuna wuxuu ku salaysan yahay daabacaadda fiidiyowyada qosolka ama kaftanka , vlogs kala duwan ama sawir-gacmeedyo gaagaaban oo sidoo kale la sameeyay sannadihii u dambeeyay sida gamer. Shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna caansan youtubers caalami ah. Waxa kale oo ay leedahay laba kanaal oo kala duwan, mid waa shakhsi ahaan oo u heellan kaftanka iyo nolol maalmeedka, iyo kan kale ee ciyaaraha fiidiyowga. Labada kanaalba waxay helayaan hal milyan oo daawasho.
Waxaa hubaal ah in sidoo kale loo yaqaan ilmo YouTube ah. Magaciisa dhabta ah waa Rubén Doblas Gundersen. Youtuber-kan oo haysta dhalasha Norway iyo Isbaanishka, waxa uu u heellan yahay in uu daabaco muuqaallada uu ku ciyaaro ciyaaraha fiidyaha ee qaybaha kala duwan, fal, argagax, sir, iwm. Waxa kale oo uu leeyahay dhawr vlogs oo muuqaal ah oo uu dalal ku dhex maro ama uu kaga sheekeeyo nolol maalmeedkiisa. Waa kan leh macaamiisha ugu badan ee Spain oo dhan, shaki kuma jiro in qof kastaa uu yaqaan magaciisa. Shaki la'aan waa mid ka mid ah youtubers-ka ugu fiican adduunka wuxuuna horey u haystay abaalmarino dhowr ah.
Luisito waa YouTuber Meksiko ah sidoo kale loo yaqaan Luis Arturo Villas Sudek. Muuqaaladiisa ayaa ah kuwo sifo badan leh maadaama ay ku saleysan yihiin socdaalkiisa adduunka oo dhan halkaas oo uu ku dabaqo taabasho kaftan ah oo soo jiidata dareenka dadweynaha. Wuxuu sidoo kale inta badan sameeyaa cunno iyo muuqaalo kale oo madadaalo ah. Luisito hadda waxaa loo arkaa inuu yahay kan ugu fiican adduunka iyadoo ay ugu wacan tahay aragtida uu helo maalin kasta, bil kasta iyo sannad kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale la guddoonsiiyey abaal-marinno badan oo ay ku sifeeyeen wax badan.
Hadii aad raadinayso taabasho kaftan iyo kaftan, ma seegi kartid channelkiisa.
Taariikhda YouTube waxay siisay waji xagjir ah bulshadeena iyo tignoolajiyadayada. Sidaas darteed qof kasta oo naga mid ah ayaa codsigan ku haysta taleefanka gacanta. Sidaa darteed, waxay noqotay aalad waxtar leh oo, iyada oo ay ugu wacan tahay casharradeeda, mararka qaarkoodna badbaadisay nolosheenna mar uun.
Waxa kale oo jira kanaalo badan oo hadda jira, marka lagu daro, YouTube sidoo kale waxay leedahay algorithm kaas oo ku tusaya muuqaalo ama waxyaabo la mid ah waxa aad inta badan aragto si aadan waxba u seegin. Shaki la'aan waa codsi qumman.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » yaa abuuray youtube